Ungaziva sei nzvimbo yekupedzisira ye iPhone yako isina bhatiri | IPhone nhau
The mukana we tsvaga nharembozha yedu Kushandisa Tsvaga yangu iPhone basa kunogona kutiburitsa kunze kweanopfuura dambudziko rimwe. Panyaya yekuba, kurasikirwa kana kuziva chinzvimbo cheimwe chishandiso, kuve nekwaniso pechinzvimbo kuchatibatsira kuti tiitorezve uye tizive nzvimbo yayo yekufungidzira.
Kuti uzive nzvimbo chaiyo yeiyo iOS chishandiso, zvinodikanwa kuti ine bhatiri kuti igone kutumira chinzvimbo munguva chaiyo. Zviripachena, kana urikupererwa nebhatiri, kushandisa iyo Tsvaga yangu iPhone basa kunongowedzera mamiriro acho zvakanyanya, nekudaro, iOS inopa mukana wekutumira nzvimbo yekupedzisira yechigadzirwa kuti igare ichiwanika, kunyangwe neiyo terminal yatove kure.
1 Ita kuti kutumirwa kwekupedzisira kweiyo iPhone nzvimbo
2 Maitiro ekuona iyo yekupedzisira chinzvimbo cheiyo iPhone
2.1 NeApple yekutsvaga app
3 Kukanganisa kwechinhu ichi
4 Unogona here kuona nzvimbo yekupedzisira yeiyo inopihwa simba kubva pa iPhone?
5 Ini ndinogona kutsvaga yangu iPhone kunyangwe painodzimwa? Ndi iOS 13 kana zvichibvira
5.1 Mashandiro anoita "Tsvaga Offline"
Ita kuti kutumirwa kwekupedzisira kweiyo iPhone nzvimbo
Zvakanakisa, pese patinotenga iPhone nyowani kana kudzoreredza chishandiso chedu kuisa vhezheni itsva yeIOS, mudziyo wedu batidza Tsvaga yangu iPhone, basa ratingaite chero nguva zvinoenderana nezvatinoda.
Nekudaro, iro basa rinotibvumidza isu kuziva nzvimbo ye iPhone yedu kana iri kupera bhatiri isina kuvhurwa nekutadza kunyangwe ichiwanikwa muchikamu chimwe chete seicho chinotibvumidza kuiwana chero nguva.
Kana tichida yedu iPhone ku Tumira nzvimbo yako bhatiri rako risati rapera Tinofanira kutevera nhanho dzinotevera:
Kutanga, tinoenda kune iyo iOS yekumisikidza sarudzo kuburikidza Zvirongwa.
Mukati meZvirongwa, tinya pa yedu iCloud account, inowanikwa kumusoro kwemenu.
Ipapo isu tinotsvaga iyo sarudzo Tsvaga yangu iPhone uye isu takagadzirisa switch Tumira nzvimbo yekupedzisira.
Maitiro ekuona iyo yekupedzisira chinzvimbo cheiyo iPhone
Kuti tikwanise kuwana zvese zviripo pachigadzirwa chedu uye yekupedzisira yakanyoreswa isati yapera bhatiri, kana isu takaita basa iri, rakatsanangurwa muchikamu chakapfuura, tine sarudzo mbiri dzatinogona.
NeApple yekutsvaga app
Iyo Yekushandisa kunyorera inowanikwa muApp Store inotibvumidza isu, kana isu tango pinda iyo data yeedu iCloud account ziva nzvimbo yechigadzirwa chedu panguva iyoyo painenge iri kana kuziva nzvimbo yekupedzisira kana yapera bhatiri.
Kana chishandiso chisina iyo Tsvaga yangu iPhone basa yakamisikidzwa, chete zita remuchina ndiro rinoratidzwa pamwe chete nerunyorwa Pasina kubatana. Kana isina bhatiri, ichatiratidza iwo iwo mavara Nzvimbo yekupedzisira pedyo nezita rekushandisa.
Tsvaga yangu iPhonevakasununguka
Kana mudziyo wako uchitarisirwa neIOS 13, hapana chikonzero chekutora Tsvaga yangu iPhone applicationSezvo Apple yakaisanganisira natively pane ese madhijitari anoenderana neyegumi nematatu vhezheni yeIOS. Panzvimbo pekudaidzwa kuti Tsvaga Yangu iPhone inonzi Tsvaga
Kana tisina chimwe chigadzirwa cheApple paruoko, ingave iri iPhone, iPad kana iPod touch, Apple inoita kuti webhusaiti yeICloud.com iwanikwe kwatiri. Kubudikidza neino webhusaiti, tinogona pinda panzvimbo yemidziyo yedu yese kushandisa iko Tsvaga basa.
Iri basa rinotiratidza zvishandiso zvese zvine chekuita neaccount yedu pamwe neyako yazvino kana yekupedzisira nzvimbo yakanyorwa isati yapera bhatiri kana kudzimwa neyakawanikwa / yakabiwa chishandiso.
Kukanganisa kwechinhu ichi
Kugona kunakirwa neakanakisa iyi iOS basa iro rinotibvumidza isu kuziva nzvimbo yechigadzirwa chedu kana isu takarasa nzira yacho, pane chinhu chimwe chete chinodiwa: vane Tsvaga yangu iPhone inogoneswa pamudziyo.
Kana isu tisina kuita basa iri, zvisingaite kuteedzera yenzvimbo yatinogarira, nekuti haigone kumisikidzwa kure, muganho unofanirwa kuwanikwa kuti ubate ruoko kune vashandisi vasina ruzivo.
Unogona here kuona nzvimbo yekupedzisira yeiyo inopihwa simba kubva pa iPhone?
Kana yedu iPhone yapera bhatiri kana yadzimwa pamaoko, Apple's nzvimbo sevhisi inozviona saizvozvo, saka kana zvichibvira ziva nzvimbo yechiteshi isati yadzimwa. Asi zvirokwazvo, zvese zvinoenderana nekuti tarasikirwa neiko kwaari.
Kana isu takaisiya yakanganikwa muresitorendi kana chitoro, zvinonyanya kuitika kuti mamaneja akaidzima vachimirira muridzi ane kodzero kuti adzoke, kubva pakuvharirwa hapana mumwe kunze kwedu anogona kuiwana.
Ini ndinogona kutsvaga yangu iPhone kunyangwe painodzimwa? Ndi iOS 13 kana zvichibvira
Kushandisa "Tsvaga kunze kweindaneti" kunongowanikwa pamidziyo inochengetwa neIOS 13 kana kupfuura
Chekutanga pane zvese, isu tinofanirwa kufunga nezve iyo vhezheni yeiyo sisitimu inoshanda iyo yedu kifaa iri kutarisira kuziva kana tichigona kushandisa iyi sarudzo. iOS 13 haienderane ne iPhone 5s kana iPhone 6 uye iPhone 6 Plus, saka kana uine imwe yemidziyo iyi, haugone kuishandisa.
Nokuburitswa kweIOS 13, Apple yakaunza chinhu chitsva chinonzi "Tsvaga Yangu Offline", iyo Izvo zvichatibvumidza isu kutsvaga nguva dzese kuti ndeipi nzvimbo yechigadzirwa chedu kunyangwe iri isina internet kubatana kana kudzimwa zvachose, nekuti hazvitsamire pagwara reGPS kana katatu nekwetiweki dzeWi-Fi kana nharembozha, asi zvinoenderana nesarudzo yeBluetooth Low Energy (BLE) protocol.
Kuti ushandise tekinoroji iyi, iyo sezvo yaiwanikwa mune zvidiki zvishongedzo zvinodaidzwa kuti Tiles izvo zvave pamusika kweanopfuura makore mashanu, Izvo zvinodikanwa kuve neanenge maviri madhijitari ane iOS 13, kana iyo iPhone kana iPad ine iOS 13 uye Mac inotungamirwa neMacOS Catalina, hatizokwanise kuwana mudziyo wedu kana isu tichingova neApple chishandiso.
Mashandiro anoita "Tsvaga Offline"
Kana isu tichigadzirisa zvese zvishandiso, gadzira zvakavanzika makiyi akagovaniswa pakati pemidziyo miviri kuburikidza nekutaurirana kwakanyorwa. Tevere, kiyi yeruzhinji inogadzirwa, inonziwo mucherechedzo, chinova chiratidzo chemidziyo yako, bhakoni rinofambiswa kuburikidza nebluetooth kune mamwe ma iPhone, iPad kana Mac zvishandiso munharaunda medu.
Kana isu tine nhamo yekurasikirwa kana kubiwa iPhone yedu, ese maPhones ayo akapfuudzwa padhuze nefoni yako ivo vanogashira iyo chiratidzo uye votipa isu nzvimbo yechigadzirwa. Panguva yese iyi maitiro, Apple haina kuwana chero nguva kunzvimbo yechigadzirwa, mukuwedzera, mushandisi ane akabatsira kuti uzviwane hauzive kana.
Panguva yese iyi maitiro ekugadzirisa uye mashandiro, mushandisi haafanire kuita chero chinhu zvachose. Kana isu tikarasa mudziyo wedu uye tichida kuziva nzvimbo yaro, isu tinongofanirwa kutevedzera matanho ataurwa pamusoro.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Nzira yekuziva nzvimbo yekupedzisira ye iPhone yako, kunyangwe ikabuda bhatiri
Victor Visier akadaro
Mangwanani akanaka, maita basa nezvose zvamakatumira, zvinonakidza kwazvo, asi mune ino yekupedzisira, ini ndine iPhone 4 handikwanise kupinda muKutsvaga yangu iPhone uye sarudza 'Tumira nzvimbo yekupedzisira'. Ndinogona kuzviita neimwe nzira here kana izvi ndezvezvigadzirwa chete zvine maIO akakwirira kupfuura 7.1.2?
Pindura Victor Visier
Hesi Victor, haukwanise kuenda kunotsvaga yangu iPhone? Iwe une iCloud yakamisikidzwa here?
Marga Carrasco Esparza akadaro
Izvo zvakafanana zvinoitika kwandiri saVictor. Uye kana mudziyo ukadzimwa, haugone kuiwana futi, handiti?
Pindura Marga Carrasco Esparza
Kwete, kana zvadzimwa tichakwanisa chete kuziva nzvimbo yekupedzisira asi kana ikashanduka, hatizokwanise kuziva chinzvimbo chitsva kudzamara chavhurwa zvakare uye chakabatana kunetiweki, ingave 3G / 4G kana WiFi.
Renato Fernandez S. akadaro
Zvinotaridza kwandiri kuti nekutadza ichagara ichiratidza nzvimbo yekupedzisira sekureba sekunge yakabatana netiwe-fi network
Pindura kuna Renato Fernandez S
Fabiana Lemos akadaro
Mhoro, husiku hwakanaka, ndinovimba unokwanisa kundipindura, nhasi ndanga ndiri nyajambwa wepasi pevhu muVenezuela, uye mbozhanhare yangu yabiwa, ndiri kuyedza kutora nhare yangu kuburikidza Tsvaga Iphone yangu, asi inondikandira meseji " hapana kubatana ", uye ini handioni iyo Yekupedzisira inowanikwa nzvimbo, iwe unozoziva kuti chingave chii? Ndatenda pamberi
Pindura Fabiana Lemos
Iyi ficha inowanikwa chete seye iOS 8
Pindura Javier Martínez
Nekuda kwebasa iri ndakakwanisa kudzoreredza nhare yangu maawa maviri ndarasikirwa nayo 🙂
inoshandisa bhatiri rakawanda?
Nezve bhatiri, mune yangu ini ndinogara ndichigadziriswa nzvimbo, mukana uye haisi fungidziro yekuti ndine iPhone 6 pamwe uye bhatiri rinogara kwenguva refu nekushandisa kwakasimba ndinosvika kumba mushure mekushanda ne40% kwete kana ini ndaive ne5s masikati ndaifanira kuchaja zvakare
Ini ndakarasa yangu iPhone 4, uye vakaibatanidza neinternet ndokuidzima, vakandiudza kuti vange vaibatidza asi ndaisaziva nzvimbo, pane nzira yekuziva here ????
Kana iyo application ikasadzikwa, haishande?
Zvakadii, ndakarasikirwa ne iPhone 4s, ine yangu iCloud account, asi yanga isina ichivharira kana chero chinhu, ndinoreva kuti inogona kushandiswa, izvo zvandiri kuda kuziva, ndeyekuti kana munhu akaiwana, ikabvisa nzvimbo, ini haichakwanise kuziva kuti iripi timu? nekuti zvinoratidzika kwandiri pasina kubatana
Pindura kune erodriguezes
Ini ndakarasa yangu iphone 4s uye ndakaita kuti ini nditumire yangu yekupedzisira nzvimbo yakavhurwa, ini handizive kuti zvinoshanda sei. Pane imwe nzira yekuzviziva kana kana iri kudzima, iwe haugone kuziva? ndokumbirawo ubatsire !!!!!!
Shamwari yakanaka, ndakarasa iPhone yangu uye yakanditumira iyo location pavakabatidza nhare asi ini ndakangozviratidza kwemaawa makumi maviri nemana uye pandakaona tsamba, maawa makumi maviri nemana yakanga yatopfuura, pane nzira yekuona iyo nzvimbo zvakare?
Ndarasa iphone yangu 6 uye ine application yakamisikidzwa kutsvaga iphone yangu asi haindiratidze nzvimbo yekupedzisira iyo inongondiudza kuti yadamburwa kubva kunetiweki
Ini ndarasikirwa neangu iPhone 6s mukutamisa kwechinguvana kubva kudzimba dzangu, ndinoishandisa zvishoma uye kana ndaenda kunotora (mazuva makumi maviri kana makumi matatu gare gare) ini handipi izvi. Ine ipad uye ndotsvaga yangu iPhone, iyo anondiudza kuti haina offline, Chii chandingaite kuti ndiitore, sezvo ini ndachinjisa dzimba mbiri kumusoro uye hachioneke, chinofanira kunge chakapera bhatiri.
Victor garcia akadaro
Ndingawana sei yangu iPhone kana iCloud isina kuvhurwa, ndapota ndiudze
Pindura kuna Victor Garcia
Iwe haugone, urombo
Ini ndakarasa yangu iPhone mazuva akati wandei apfuura nhasi bhatiri harisisina mari, kana ndikarangarira yangu iCloud account uye ndinoda kuziva pekupedzisira nzvimbo yacho, asi ruzivo nderekuti ini handirangariri dai ndaive nesarudzo yekutumira yakagadzirirwa nzvimbo yekupedzisira ... zvichave zvichikwanisika kuiziva.
Julian Parra akadaro
Yangu iPhone yakabiwa, asi pandinoda kuidzima, inondibvunza kodhi yekusimbisa iyo, maererano neshoko, inondiudza kuti ndisarudze pachiratidziro che iPhone yangu kana pamidziyo yakavimbika, ndinowana sei kodhi iyi iyo ine mbiri chinhu chokwadi
Pindura kuna julian parra
Mhoroi, nezuro ndakarasa yangu iPhone mbozhanhare uye ini ndinopinda iko kunyorera «tsvaga iphone yangu» uye inoita kunge isina kubatana uye ndinofona ichibva yadzima. Zvandinogona kuita?
Ana Sierra akadaro
Vakaba iphone yangu 6s, mushure memazuva mana vakaibatidza husiku, mangwanani ndakapinda chiziviso chekuti ndakasvika icloud, asi chishandiso hachioneke. Vachibvisa here? Pachave nemukana wekutsvaga nzvimbo yekupedzisira, iyo meseji yakaonekwa?
Pindura Ana Sierra
johanna osorio akadaro
Mhoroi ndarasa iphone 6 ini handirangarire iyo icloud password
Pindura kuna johannna osorio
Negadziriro yeparutivi iPhone wako AnyTrans
7th chizvarwa iPod touch kana Nintendo Chinja kutamba Fortnite